Ahoana ny fomba hanombohana fandraisana anjara amin'ny Xfce na tetikasa loharano misokatra hafa | Avy amin'ny Linux
tsy tia | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Ity dia fandikana lahatsoratra tena mahaliana hitako, navoaka vao tsy ela akory izay Jannis Pohlmann, na mihoatra na latsa-danja noho ny filohan'ny Foundation Xfce ankehitriny. Izy no mitazona ny sasany amin'ireo fonosana lehibe indrindra amin'ny tetikasa toa an'i Thunar sy Garcon. Niezaka ny hitazona ny fandikan-teny ho mahatoky araka izay azo atao amin'ny soratra tany am-boalohany aho, miaraka amin'ny fanitsiana vitsivitsy mifanaraka amin'ny fiteninay.
Efa elaela aho no nanavao ity tranokala ity ary mbola lava kokoa hatramin'ny nanoratako zavatra mahasoa. Vao tsy ela akory izay no nahazo mailaka vitsivitsy avy amin'ireo olona mitady handray anjara amin'ny Xfce ary nieritreritra ny hizara kely ny "fahendrena" azoko nandritra ny taona maro izay niasa tao amin'ny Xfce sy nanao asam-piarahamonina marobe. Tsy voafetra ho Xfce fotsiny ny taratrao ary mihatra amin'ny tetikasa maro hafa.
Misy fahamarinana mangidy ho an'ireo izay mitady torolàlana haingana hanombohana mandray anjara amin'ny Xfce: mila mamantatra manokana ianao.
Tsy hoe kamo izahay na tsy mandray ny anjara birikinay. Raha ny marina, heveriko fa tena tsotra izany: ho faly ianao, handrisika ary amin'ny farany, hahomby kokoa ianao raha miasa amin'ny zavatra mahaliana anao. Afaka manampy anao izahay hanapa-kevitra ny hampiasa ny fotoananao amin'ny tetikasa mora kokoa, endrika na hadisoana heverinay na ireo mpampiasa anay fa mendrika. Tetikasa sasany no mampiseho an'io tena hita maso, saingy ao amin'ny Xfce, ity vaovao ity dia miafina ao amin'ny halalin'ny wiki misy antsika, ireto misy rohy sasantsasany mety hitanao fa mahaliana:
Design GIS - hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa Xfce
Lisitry ny fiasa tianao amin'ny singa - nataon'ireo mpampiasa anay
Lisitry ny fiasa irina ho an'ny tontonana - nataon'ireo mpampiasa anay
Mazava fa mety ho hita bebe kokoa ireo fampahalalana etsy ambony. Mety misy rohy ao amin'ny tranokala Xfce izay mitarika lisitra voakarakara tsara sy vaovao. Hanampy ny olona ve izany? Angamba
Mety tsara fa ny fampahalalana dia tsy fanindriana fotsiny. Tetikasa loharanom-baovao misokatra dia momba ny fanesorana ny mangidihidy manokana. Toy izao no nidirako an-tsehatra tamin'ny zavatra rehetra nataoko nandritra ny taona maro. Ity fomba fiasa ity dia hita taratra amin'ny zavatra ataon'ny olona ary indraindray amin'ny fomba ahazoan'ny orinasa vola. Raha mieritreritra an'izany izao, dia fotokevitra miorim-paka ao amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona (eritrereto: ny famoronana sy ny fanatsarana ny fitaovana, ny indostrialy ary izany rehetra izany)
Noho izany, esory ny mangidihanao.
Raha te-handray anjara amin'ny tetikasa ianao dia andramo izao:
Avereno jerena ilay tetikasa ary eritrereto izay tsy tianao sy izay tsapanao fa azo hatsaraina.
Miezaha manangona vaovao momba ireo sombin-javatra tafiditra amin'ilay endri-javatra heverinao fa tsy ao na ilay bibikely inona no hitanao.
Miezaha mitady ny toerana mety hanampiana ny endri-javatra na amboary ny anao bibikely.
Anontanio ny mpamorona raha liana amin'ilay endri-javatra noforoninao izy ireo na manamarina raha efa tao anaty ilay olana tracker bibikely ny tetikasa,
Ny ambiny dia ny fifandraisana sy kaody.
Tsy dia lavitra izany satria mety tsy afaka manome zavatra misy lanjany lehibe ianao hatramin'ny voalohany. Fa raha manolo-tena ianao, manana fotoana malalaka ampy hanovana fahasamihafana, ary vonona hanatsara ny dingana tsikelikely, dia mety hahatratra ny fotoana handraisanao andraikitra amin'ny asa bebe kokoa sy mahaliana sy manan-danja kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ahoana ny fomba hanombohana fandraisana anjara amin'ny Xfce na tetikasa loharano misokatra hafa
Maniry aho fa ho mora toy ny ao amin'ny Matrix daholo ny zava-drehetra, fantatrareo, mampifandray tariby ao aorianay ary mianatra mianatra… XD
Amin'izao fotoana izao dia tokony hampianatra fandaharam-pianarana any amin'ny akanin-jaza izy ireo, hoy aho 🙂
Lahatsoratra tsara, io XFCE SVG io ihany no naka ahy tontolo hisokatra.
Ny marina dia tsy niraharaha ny fanitarana ny sary famantarana aho. Tao amin'ny sary izy io ary nataoko manasongadina azy ary io no izy.